Ny fomba tsara indrindra anaovana ny karaoty
Tranonkala mampiaraka tsara indrindra Tuliara...
Tranonkala mampiaraka tsara indrindra Tuliara Madagaskar
Ny tena zava-dehibe dia hoe avo izy ireo vita amin'ny sakamandina ny ondana ary tsy mila mitondra manure vaovao ao anatiny ianao - crumbly fotsiny i. tsara-lozo humus sy lavenona. Eo am-pandriana dia ampaiko lava be ny halavako telo, maka ny tany avy amin'izy ireo apetrako avy hatrany ao anaty siny , miaraka amina zaridaina mahazatra 10 cm ny sakany - ny habeny tena mety indrindra ho an'izany zavatra izany. Ary ny elanelan'ny elanelan'izy ireo, dia cm.
Avy eo dia mamaky ireo kôlônina aho amin'ny vahaolana hydromate potassium kapila iray isaky ny rano 10 na manondraka lavenona fotsiny. Ary alaivo an-tsakany sy an-davan'andro ny volombavabolan-tsavony ao amin'ireto hatodrano ireto Koa satria ny tany dia maivana, ny adiresy avy hatrany dia miorina amin'ny tany, toy ny hoe scotch raozy. Avy eo amin'ny siny dia natory ny koveta teo amin'ilay tany efa nailikilika teo aloha aho, ary nisy sarony matevina.
Nahoana no avy amin'ny siny?
Eny, satria tsapako amin'ny tanako ny habetsaky ny tany tokony harotsaka, ankoatra ny vato kesika miaraka amin'ny tsipika dia tsy hiditra ao anaty lavaka. Tany am-piandohana, dia nanipy ny kirany teo amin'ny sisiny izy ary nodorana ireo voa nafafy. Ankehitriny dia mazava ny zava-drehetra. Ho an'ny mena raha tsy manadino aho , dia mametraka masira iray marevaka aho amin'ny 30 cm ary ny lohan'ny lohan'ny lohalika tsirairay: mitsoka lavitra lavitra noho ny moka izy ireo ary tsy manelingelina azy io, ary manana fahafahana hampiasa azy ireo amin'ny salady raha vao haingana.
Vita avy hatrany ny fambolena tsy misy lamba. Saingy rehefa afaka herinandro aho dia manadio azy, mandehandeha moramora amin'ny lavaka eo anelanelan'ny laharana ary averiko any amin'ny toerany ny trano fialofana. Manao izany imbetsaka aho alohan'ny hiterahana. Milaza asa fanampiny ianao? Ary ny zava-drehetra dia ny mifanohitra amin'izany: misaotra an'io teknika io, dia tsy mila manjono sy mamafa ny tifitra aho!
Ankoatra izany, satria malalaka ny sisintany ho an'ireo izay mamela ny haben'ny zaridaina, manoro anao aho mba hahatonga azy ireo ho cm , dia tsara ny manosihosy ny karaoty amin'ny tapany faharoa amin'ny fahavaratra. Aorian'izay, ny tsimparifary eo am-pandriana dia tena kely dia kely, ary afaka misintona mora foana ao anatin'ny minitra vitsy. Raha ny fampisotroana rano dia ataoko ihany aorian'ny fambolena an-tampony ireo farafahakeliny 15 cm. Marina, raha mafana tokoa izany, dia mandany ny rano alohan'izay aho, miaraka amin'ny tampony avo kokoa.
Ary manondraka be dia be aho, mandrotsaka rano ao am-pandriana mba ho tonga lalina amin'ny fakany ny hamandoana - 25 cm farafaharatsiny, fa hatramin'ny antsasaky ny volana Aogositra dia tsy nandatsaka rano velively aho. Indray mandeha dia niroborobo izy: tamin'ny volana aogositra nisy ny hafanana tena izy, ary nampisotroiko tamin'ny karaoty toy ny olon-drehetra ny fandriana. Teo amin'ny milina fotsiny no nanaovany an'izany - tiany ny handoro ny zavamaniry amin'ny hafanana toy izany.
Ary iza no te? Tsara tokoa, ny tendron'ny karaoty dia maintso, mavitrika, tena faly aho. Nihevitra aho fa ho be ny fakan'ny faka. Ary nanomboka nijinja izy - nivadika ho antonony ny karaoty rehetra, ankoatr'izay, tena voangory ny cores, ary ny sisiny kosa, mifanohitra amin'izany aza, manify.
Fepetra mahakasika ny saran'ny sidina
Raha ny fandehany taty aoriana dia nivadika ho tsy misy marika ihany koa izy io, ary notahirizina tsy nahy. Io safidy io dia tsy mandeha ihany koa, ary tsy misy asa fanomanana ilaina eto afa-tsy, mazava ho azy, ny fanomanana ny fandriana sy ny aloka. Izaho dia manomana jelly starch, nefa tamin'ity indray mitoraka ity dia manify noho ny voankazo izy. Aleoko mangatsiaka izy io, fa mafana, arotsaho ao anaty fitoeran-drano lehibe misy tsimoka, arotsaho tsikelikely ny voa ao anaty sosona iray ampahany - roa fonosana tsirairay , atsofohy am-pitiavana ny zava-drehetra amin'ny hazo vita anaty rano ary avy hatrany mankany amin'ny zaridaina: arotsaho moramora ny jelly miaraka amin'ny masom-boany grooves.
Tsy manao haingana ity aho fa tsy miadana - 1 litatra ny takelaka ampy amin'ny metatra. Ary avy eo aho dia afafazo ny razana, araka ny efa voalaza etsy ambony. Izay dia vita, vita ny fametrahana azy.
Greenhouse fambolena tsara indrindra, mpamokatra entona varotra | Shengqiang
Ho ahy dia ireo fomba roa ireo no mety sy mora indrindra. Mihevitra aho fa hanaiky ahy ny zaridaina zokiolona hafa - ny lamosin'izy ireo sy ny lohaliny dia hifidy ny tenany. Ary satria mandritra ny fikojakojana ny orinasa, voavonjy ny hery, azo atao ny manara-maso akaiky kokoa ny bibikely. Ary avy eo ianao dia mihodinkodina eo amin'ny saha, ka, ohatra, dia mifaly amin'ny voninkazo serizy ary manadino fa izany koa dia famantarana ny fiandohan'ny fahavaratra amin'ny karaoty. Nandritra ny taona maro dia nampiasa amika azon-tsika iadiana aho: sotrokely amin'ny rano iray litatra valo, izay arotsako mivantana eo am-pandriana azonao atao ny manisy savony kely amin'ity vahaolana ity - ny hametaka ny ranon-drano amin'ny tampon-tanana.
Aorian'ny telo andro dia averiko ilay fomba. Ammonia amidy any amin'ny fivarotam-panafody, lafo, ary mahomby ny vokatra ary tsy manimba. Ankoatr'izany, ny zezika amonia. Fomba iray hafa amin'ny lalitra karaoty: Mividy savony ranon-tsavony aho, misaraka amin'ny rano aho ary mandeha eo am-pandriana miaraka amin'ny tsiranoka manondraka.
Ary ny talenta birch dia amidy ao amin'ny fivarotam-panafody ihany koa, ampofoniko miaraka aminy ireo lamba ary aparitako eny am-pidirana, ny fofony dia mampisafotofoka ny karaoty, ary tsy mandinika ny fambolena intsony izy. Ho an'ny sakafo mandritra ny fahavaratra, dia mitovitovy amin'ny karazany toy ny Caramel sy Dordogne asehon'ny vanim-potoana fohy fahamatorana - andro ihany.
Ary ho an'ny fitahirizana ny ririnina dia mamafy aho amin'ny voalohany ary na dia amin'ny tapany faharoa ny volana Mey Kanada, Nandrin, Narbonne, Dayan, Samson ary Ramos miaraka amin'ny fotoana matroka ao anatin'ny andro. Vakio ihany koa: Fambolena tongolo miaraka carrot. Ity no fomba famafazana raibeny tranainy.
Nataoko tao anaty tavin-koditra ny masomboly, nafatony tamin'ny kitrokeliny, namela rambony, ary nanondraka azy tamin'ny rano. Any aoriana any dia eo amoron'ny zaridaina no amarako ny volony lalina, jereo, asio rano kely ao ary mametraha bundle. Nihodina aho, namela ilay rambony teo ambony. Mba tsy hahavery ahy, dia mametraka tsikombakomba ho fiarovana ihany koa aho.
Mamela ny zava-drehetra amin'ity endrika ity mandritra ny telo na efatra andro aho, manara-maso ny hamandoana ny tany. Raha tsy mipetrapetraka izany, mandritra ny fotoana fohy dia hanjary ho masaka ny voa. Maka ny kitapo aho, manaparitaka ireo masom-boly ao amin'ny gazety, manamaivana azy kely ary manomboka mamafy, manamboatra azy ireo amin'ny fasika mba tsy hanamafisana ny fambolena. Fikarakarana bebe kokoa - toy ny tamin'ny tranga roa voalohany.
Izao vao ilaina ny manala ny làlan-kaleha - angamba indroa heny aza. Tsy maintsy milaza aho fa izany dia fomba iray tena tsara koa - tsara ny fitomboana, fa raha tsy izany dia ampiako izany raha tonga ny fotoana amin'ny fotoan'ny lohataona. Eny, adinoko ny milaza ny momba ny akanjo ambony. Ny fotoana voalohany itondrako karaoty telo herinandro aorian'ny fambolena: ao anaty rano 10 litatra mamelona 1 sotro aho. L potassium sulfate, 1 sotrokely.
L superphospate roa sy 1 tsp. Ho an'ny kianja 1. fandriana m aho mandany 4 litatra amin'ity fitaovana ity. Mandany akanjo faharoa aho ao anatin ny tapa-bolana: anaty rano 10 litatra mamelona 2 sotro aho. L ammofoski ary 1 sotrokely. L potassium sulfate. Consumer - 5 litatra isaky ny toradroa. Famahanako ny zezika rehetra amin'ny tany mamy eo ambany fakany. Vakio ihany koa: Fambolena zana-kafe sy karaoty - ny fanamarihana dia ratsy sy tsara.
Amin'ny fotoana inona indraindray dia tsy ilaina ny mandao ny asa fanorisorenana toy izany toy ny fanakanana karoty. Saingy, misy izany, mitranga izany, fomba iray izay mamela antsika hamaha io olana io sy hametrahana ny vokatra. Farany, dia nanapa-kevitra ny hizara ny traikefa tamin'ny fambolena karaoty aho. Ankoatr'izay, ny fomba horesahina dieny izao dia mety tsara amin'ny hafa mifandraika amin'izany, ilay voa "voa kely", toy ny kesika sy persily. Mamboly azy ireo aho, amin'ny alàlan'ny fandriana tery sm ny halavany ary 8 m ny halavany ny halaviran'izy ireo dia 60 ka hatramin'ny 80 cm.
Loatra ny taniko, i. ao anaty tany mando io dia mirehitra, ary rehefa milentika ny masoandro, dia miraikitra miaraka aminy izy. Fa ny vokariko dia mbola tsara. Ahoana no fomba hahatratrarana izany? Tamin'ny lohataona, taorian'ny tany akaikin'ny fambolenay mpamboly, amin'ny teny tao amin'ny saha nandritra ny roa laces bumpers fandriana ho avy sm ny haavony, ka rehefa tsy fitarihan-drano ny rano sisa ao an-lalantsara.
Avy eo ploskorez 10 sm lavitra avy amin'ny flanges manao grooves roa 5 sm lalina elanelana therebetween dia azo any ho any ao amin'ny cm , ary be dia be tsy vonton-drano manondraka azy avy any amin'ny nozzle, ka tsy nisy rano. Rehefa voaongana izy io, dia misy veliran-tany mivelatra eo amin'ny andrin-tsambo, izay zava-dehibe amin'ny fametrahana ny voany any: hianjera amin'ny mitovy avokoa izy rehetra. Aorian'io, mandehana amin'ny fanomanana ny voa. Mamelona azy ireo mandritra ny telo ka hatramin'ny adiny efatra amin'ny rano mafana aho ka nesorina ny menaka iankinan'ny aina , ary avy eo dia maintiko azy ireo amin'ny fanjakana misosa, mamelatra azy amin'ny sehatra iray amin'ny gazety.
Avy eo dia mameno kitron-tsilo isan-karazany aho fara-fahakeliny amin'ny iray ampahatelony miaraka amin'ny fasika maina, ary arotsaho ao anaty ratra ny masomboly, alamino ny zava-drehetra ary manomboka mamafy.
no comment® madagascar - interview - EMY GA - styliste - nc 122?
faritra mampiaraka haingana ao Mahajanga Madagaskar.
Antsipirian'ny tolotra misy fihenam-bidy!
Tolotra sidina fihenam-bidy Antananarivo mankany amin'ny Nosy-Be - Tsaradia;
Tahaka izany ity. Maka fasika fasiana vovoka aho ary manipy izany haingana any amin'ny farany ambany. Ankoatra izany, ny ampahany iray amin'izany dia ampy ho an'ny metatra eo amin'ny ambaratonga, ary toy izany dia mandehandeha eny am-pandriana manontolo aho. Ny tena mahavariana dia ny fahitana ny fasika amin'ny masomboly dia hita tsara ao anaty maizina sy maitso, ka mora ny manitsy ny fizotran'ny voa. Miparitaka izao, manarona ny kôlônina miaraka amina tiroivana mivelatra amin'ny tavoahangy sy ny humus ary raha tsy ampy izy ireo dia ampio menaka fasika ho azy ireo miaraka amin'ny elanelan'ny 1, cm ary mametaka azy amin'ny saka fisaka.
Ny karaoty rehetra nafafy. Amin'izay fotoana iray ihany ny fandriana iray dia manana kitapo maromaro misy voa.
Offre spéciale Antananarivo vers Nosy-Be
Tsy manarona na inona na inona aho ny zava-maniry, satria afaka mankany amin'ny dacha ihany aho amin'ny faran'ny herinandro, na amin'ny tranga ratsy indrindra. Avy eo dia ampisotroiko rano fotsiny ny fambolena avy amin'ny fampisandremana miaraka amin'ny zozoro, ka eo afovoany sy eo anilan'ny sisin'ny fandriana dia maniry mafy ny ahitra, ary raha mivoaka avy eo izy ireo dia nopotehiko mora foana izy ireo miaraka amin'ny mpanapaky fiaramanidina - satria ny toerana eo anelanelan'ny andalana dia ahafahanao manao izany tsy misy olana.
Ny felam-karaoty dia mipoitra amin'ny halavirana sm eo amin'ny tsirairay avy. Ary rehefa afaka izany, taorian'ny fitomboan'ny ravina marina voalohany,.
mora fotsifotsy ny voly fambolena voalohany sy farany, ka mametraka elanelana eo anelanelan'ny zana-drà cm ary manamboatra tsipika amin'ny andalana iray. Mandritra izany fotoana izany, ny fanintsanana sy famaha ny filaharana.
Related tranonkala mampiaraka tsara indrindra Tuliara Madagaskar
Aminny fiarahana aminny Fianarantsoa Madagaskar
Matchmaking manokana Mahajanga Madagaskar
Olona mampiaraka aminny Antananarivo Madagaskar
Fisakafoanana atoandro Madagaskar
Filalaovana lalao Tuliara Madagaskar
Mampiaraka mihoatra ny 50 Tuliara Madagaskar